को हुन नेपालका हिमालयन टाईगर ? - Sunkesari
को हुन नेपालका हिमालयन टाईगर ?
June 21, 2019 sunkesari News जीवन शैली विचित्र संसार
भरतबहादुर बिशुराल खासै कसैले याद गर्दैनन हिमालयन टाईगर भन्दा जो कोहीले सजिलै चिन्छन् । नेपालमा रेस्लर गुरु र रेस्लर अर्थात पहलमानको रुपमा परिचित भरतबहादुर बिशुरालको शारीरीक बनौट देख्नेबित्तिकै जो कोही उनलाई हेरीरहन्छन् । हाल उनि १ सय १० केजी तौलका छन् । रेस्लर भएपछि खाईलाग्दो देखिनुपर्छ उनि भन्छन् ।
११ बर्ष आर्मीमा जागिर खाएर छोडेका रेस्लर भरतबहादुरको जीन्दगी केलाउंदै जादा उनले नेपालमा कन्जर्भेटीभ पार्टी खोलेर राजनीतिमा पनि होमीएका रहेछन् । तर सफल हुन नसकेपछि उनि अमेरीका लागे अमेरीकामा १९ बर्ष बिताउंदा अमेरीकाका रंगिन र दुखद सबै जिन्दगीका भोगाईसंगै रेस्लर बनेर उनि नेपाल फर्किए ।
राजा बिरेन्द्रपरिवारसंग राम्रै हिमचिम भएका भरतबहादुर बिशुराल उर्फ हिमालयन टाईगरले अमेरीकामा फलफुल बेच्ने देखि रेस्लीड जगतमा समेत आफुलाई परीचीत गराए ।
जीन्दगीमा ४ वटा विवाह गरेका रेस्लर भरतले अमेरीकामा विवाह गरेका ह्वाईट अमेरीकन हाल डिभोर्स भैसकेको पुर्व श्रीमती र छोराछोरीको याद गर्दै भक्कानीन्छन । उनै भरतबहादुर बिशुरालको ब्यक्तिगत र पेशागत जिन्दगीका कुराकानी भीडीयोमा
ध्रुर्व न्यौपाने पायलमा पुलीस अफीसर
फिल्म रिपोर्टीड डर लाग्दो छ आजीवन कलंक लाग्यो – किशोर श्रेष्ठ